Indlu yanamhlanje eneNetflix yasimahla eGmunden
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGeorg
Indlu yale mihla ubuninzi babantu aba-4 kwindawo esembindini enombono weTraunstein kunye neNetflix yasimahla ikulindile. malunga nama-80 m² alungiswe ngokupheleleyo kwaye asanda kufakwa indawo yokuhlala enengqwalasela enkulu kwiinkcukacha kwaye zonke izibonelelo kufuneka zifane nekhaya lesibini xa uhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide, apho unokuziva ukhululekile kwaye uphumle. Kukho amagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nekhitshi eliphangaleleyo lokutyela.
Chitha iholide yakho eGmundner Villa njengomqambi odumileyo uCarl Goldmark (1830 ukuya ku-1915), owake wachitha iinyanga zasehlotyeni apha. Ngombulelo kwiindonga ezityebileyo zezitena, akukho moya womoya ofunekayo; Ukutsha kwendalo kunye nokumnandi ehlotyeni kuyaqinisekiswa.
Indawo yokungena eyahlukileyo enebhokisi engundoqo ikuvumela ukuba ukhangele ngaphandle koqhagamshelwano. Indawo yethu yoku-1 ikwindawo ezolileyo kwaye kukuhamba nje imizuzu eyi-8 ukusuka kwiziko/iTraunsee. Unokwenza yonke into kwiimfuno zakho zemihla ngemihla ngokukhawuleza kwaye kulula ngeenyawo okanye ngemoto. Ababhaki abanesidlo sakusasa, iindawo zokutyela, iivenkile, abacoci, iofisi yeposi kunye neendawo ezibonwa eGmunden zikumgama wokuhamba.
Malunga ne-100 m kude nefulethi yeyona ndawo ikufutshane yokuqubha kwiTraun; Imizuzu eli-15 kude kukho indawo yokuhlambela yeTraunsee iWeyer kunye nemizuzu engama-30 kude ne-lido eTraunsee. Ukuba ukhetha ukuthatha ibhasi ukuya kwiindawo zokuhlambela, uya kufumana indawo yokumisa ibhasi elandelayo kanye phambi kwendlu, okanye unokuhamba ngebhayisekile ecaleni kweTraun Promenade entle.
Ukuba ukhetha ukuhamba, iGmundner Glücksplatz entle ikulungele ukuhamba. NgeGoldmarkstiege ungahamba ngemizuzu emi-5 ukuya eKalvarienberg (Glücksplatz) ngombono omangalisayo phezu kwechibi lonke kunye neTraunstein. Uhambo olude, malunga nemizuzu engama-25 (ngeenyawo), uhambo oluya kwinqaba entle ye-Orth luyacetyiswa.
Ukuba ufumana i-wanderlust, kukho iintaba ezininzi ezifumanekayo zokuhamba, kodwa kunye nokuhamba ngebhayisikili entabeni. Ngemoto yekhebula (umgama: i-30 min) unokunyuka uye kwi-Grünberg, enikezela ngamava endalo ekhethekileyo entabeni: indlela yomthi.
Iindawo zokupaka zikawonke-wonke kunye nesikhululo sebhasi zikwindawo ekufutshane nefulethi.
I-tram yi-800m ukusuka kwindlu kwaye iya kwisikhululo sikaloliwe ukuba ukhetha ukuza ngololiwe.
4.96 ·Izimvo eziyi-49
Indawo yokuhlambela ekufutshane ikwiTraun, malunga ne-100 m ukusuka kwindlu; Imizuzu eli-15 kude kukho indawo yokuhlambela ye-Traunsee i-Weyer kunye ne-lido e-Traunsee, imizuzu engama-30 kude. Ukuba ukhetha ukuthatha ibhasi ukuya kwiindawo zokuhlambela, uya kufumana indawo yokumisa ibhasi elandelayo kanye phambi kwefulethi, okanye unokuhamba ngebhayisekile kwi-promenade yeTraun entle.
Ukuba ukhetha ukuhamba ngeenyawo, iGmundner Glücksplatz entle ikulungele ukuhamba. NgeGoldmarkstiege ungahamba ngemizuzu emi-5 ukuya eKalvarienberg (Glücksplatz) ngombono omangalisayo phezu kwechibi lonke kunye neTraunstein. Uhambo olude, malunga nemizuzu engama-25 (ngeenyawo), uhambo oluya kwinqaba entle ye-Orth lufanelekile.
Ukuba une-wanderlust, kukho iintaba ezininzi ezifumanekayo zokuhamba, kodwa kunye nokuhamba ngebhayisikili entabeni. Ngemoto yekhebula (umgama: i-30 min) unokunyuka uye kwi-Grünberg, enika amava ayingqayizivele endalo kwincopho yentaba: indlela yomthi.
Umbuki zindwendwe ngu- Georg
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlu okanye ufuna iingcebiso, sinakho ngefowuni, i-SMS, i-WhatsApp kunye ne-imeyile (impendulo kwiyure ye-1).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gmunden